के पुटिनले अमेरिकी सर्वोच्चता खत्तम गर्लान् ? |
के पुटिनले अमेरिकी सर्वोच्चता खत्तम गर्लान् ?
22 February, 2017 | Bhawana Pathak | 740 Views | comments
रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनसँग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको खुलापनबाट वासिङटनमा विदेशनीतिसँग जोडिएका अधिकांश प्रतिष्ठान निराश छन् । अब त्यस्तै इच्छा युरोपका केही नेता पनि गर्न थालेका छन् । फ्रान्स, इटली, हंगेरी, चेक गणराज्यका नेता घोर दक्षिणपन्थी छैनन् । उनीहरू सबै क्रेमलिनका एजेन्ट पनि होइनन् । यस्तो स्थितिमा एउटा प्रश्न उठ्छ, पश्चिममा पुटिनप्रति यो आकर्षणको कारण के होला ? बिबिसी संवाददाता टिम ह्विलको लेख आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
अमेरिकी कंग्रेसका नेता डेना रोअरबाकर भन्छन्, ‘म पुटिनलाई राम्रो व्यक्ति ठान्दिनँ । म उसलाई खराब व्यक्तिका रूपमा हेर्छु तर विश्वको हरेक खराब व्यक्ति हाम्रो शत्रु त होइन । यहाँ यस्ता कैयौँ क्षेत्र छन्, जहाँ हामीले सँगसँगै काम गर्‍यौँ भने एउटा असल विश्व बनाउन सक्छौँ । रुस पश्चिमको दोहोरो मापदण्डको सिकार पनि भएको छ ।’
यस्तै विचार केही पश्चिमी विशेषज्ञको पनि छ । बेलायतको केन्ट विश्वविद्यालयमा रुसी तथा युरोपेली राजनीतिका प्राध्यापक रिचर्ड साकवा भन्छन्, ‘हामी यस्तो इको च्याम्बरमा छौँ, जहाँ केवल आफ्नो मात्रै आवाज सुनिन्छ । त्यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छ भने राम्रो हो । तर, जब रुस आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षाको कोसिस गर्छ, तब त्यो अवैध हुन्छ । त्यसलाई आक्रमण मानिन्छ ।’
रुसले २०१४ मा क्रिमियालाई आफ्नो कब्जामा लिएको थियो र युक्रेनका विद्रोहीलाई सैन्य सहायता दिएको थियो । विश्वले यसलाई रुसी सीमाको विस्तार गर्ने पुटिनको कोसिसको रूपमा हेरेको थियो ।
न्युयोर्क विश्वविद्यालयको रुसी अध्ययन केन्द्रका अवकासप्राप्त प्राध्यापक स्टिफन कोहेन भन्छन्, पश्चिमको विश्वमा राष्ट्रपति पुटिनको तिरस्कारको कारण वास्तवमा उनका पूर्ववर्ती बोरिस यल्तिसनका सुधारलाई पुटिनले तिरस्कार गरेका कारण पैदा भएको निराशा हो । केही रुसी त्यो समयको खराब कानुन व्यवस्था तथा गिर्दो जीवनस्तरको श्रेय यी सुधारलाई दिन्छन् । पुटिन एकजना युरोपेली मूलको व्यक्ति हो । उनी यस्तो देशमाथि शासन गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् जो आंशिक रूपले मात्र युरोपेली हो ।
रुससँग सम्बन्ध सुधानुपर्ने माग गर्ने प्रोफेसर केही सीमित उदारमा मानिसमध्ये एक हुन् । तर, रुससँग सम्बन्ध सुधार्न चाहनेवाला अधिकांश अमेरिकी राजनीतिक रूपले सही छन् ।
सोभियत संघको हिस्सा रहेको पूर्वी युरोपको अधिकांश देश शीतयुद्ध पछि नेटो तथा युरोपेली युनियनमा सामेल भए । यी देशका केही पूर्व र केही वर्तमान नेताहरूले पुटिनसँग कुनै ठूलो सम्झौताको प्रयास क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि खतरा हुनेछ भनी टम्प सचेत गराएका छन् ।
तर, मध्य युरोपको देश हंगेरी सरकारले फरक रवैया अपनाएको छ । हंगेरीका विदेशमन्त्री पिटर शिआटो भन्छन्, हामी रुसलाई हंगेरीका लागि खतराको रूपमा हेर्दैनौं । वैश्विक मामलामा रुस र अमेरिका मिलेर काम गरेनन् भने पूर्वी युरोपमा सुरक्षा कमजो हुन्छन् ।
हंगेरी क्रिमियामाथि रुसले कब्जा गरेपछि रुसमाथि लगाइएको पश्चिमी नाकाबन्दी हटाउन माग पनि गर्दै आएको छ । त्यसो त लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा केही पाबन्दी लगाएको र रुससँग सम्बन्ध विस्तार गरेका कारण हंगेरी सरकरको आलोचना पनि भइरहेको छ । हंगेरीका प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि युरोपले मुस्लिम देशमा हुने आप्रवासनको मामिलामा इशाइ मूल्य बचाइराख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
रुसले पनि आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान र इशाइ मूल्यलाई बचाइराख्न काफी प्रयास गर्दै आएको छ । पश्चिमका राष्ट्रवादीहरू रुसलाई सहयोगीको रूपमा पनि हेरिरहेका छन् । (बिबिसी डटकमबाट)
#के पुटिनले अमेरिकी सर्वोच्चता खत्तम गर्लान् ?